के ऋतिक रोशन 'स्पाइ' हलिउड फिल्ममा मुख्य भूमिका खेल्ने छन ? | के ऋतिक रोशन 'स्पाइ' हलिउड फिल्ममा मुख्य भूमिका खेल्ने छन ? |
के ऋतिक रोशन ‘स्पाइ’ हलिउड फिल्ममा मुख्य भूमिका खेल्ने छन ?
उज्यालो प्रतिनिधि २० कार्तिक २०७७, बिहीबार कला/साहित्य
नयाँ दिल्ली । यस समयमा बलिउडमा दुईवटा प्रचलनहरू छन्। एकातिर, केही बलिउड कलाकारहरू ओटीटीतिर मोडिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, केही बलिउड अभिनेताहरू आफ्नै लागि हलिउडमा केही राम्रो चरित्रहरूको खोजी गर्दैछन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार ऋतिक रोशन हलिउडको ‘स्पाइ’ फिल्ममा मुख्य भूमिकाका लागि कुरा चलिरहेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... पप स्टार बियन्सेले ८० हजार माहुरी पालेकी छिन, कारण थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ तपाईं !
मिड-डेमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार बलिउडको जबरदस्त एक्शन हीरोले स्टूडियोमा भूमिकाको लागि शुट गरी अडिशन पठाएको छ। यद्यपि वार्तालाप अझै प्रारम्भिक चरणमा छ। तर यदि सबै ठीक भयो भने, चाँडै प्रशंसकहरूले खुशीको खबर सुन्ने मौका पाउनेछन्। यसै समयमा, यसको लागि ऋतिक रोशनले आफ्नो आगामी सुपर हीरो फिल्म क्रिस -४ को लागि पनि शुटिङ समाप्त गर्नुपर्नेछ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... हिममान्छेको देशमा
यसभन्दा पहिले मिड-डेमा नै राकेश रोशनले क्रिस-४ को स्क्रिप्टमा धेरै काम गरिसकेका थिए। क्रिस श्रृंखलाको यो चौथो फिल्ममा ऋतिकको चरित्र क्रिस अर्थात् क्रिस आफ्नो बुबा रोहित मेहरालाई फिर्ता लिन टाइम ट्राभल गर्न सक्दछन्।
यो पनि पढ्नुहोस् ... हाम्रो नेपाल(कविता)- सेमसाङ वाइबा
फोटोपत्रकार वन्तको ‘परदेशिको पिडा..’ नामक पहिलो म्यूजिक भिडियो
गायक बाबु मुस्कान जीको ‘तिम्रो माया’ बजारमा (भिडियो)
‘लक्ष्मी’को नयाँ गीत ‘बमभोले’ मा अक्षय कुमारको जबरजस्त